Ukuphusha kwe-iPhone 7 Plus kwehluleka ukunqanda ukwehla kokuthengisa | Ngivela kwa-mac
Ukuphusha kwe-iPhone 7 Plus kwehluleka ukumisa ukwehla kokuthengisa
Kusukela kuqale lo nyaka, I-iPhone ikubonile ukwehla kokuthengisa kwayo kakhulu. Yize lo mkhuba ujwayelekile emakethe ephezulu ye-smartphone, iyaqhubeka nokuheha ngoba kusukela ngo-2003 i-Apple ayikaze yehliswe ukuncipha kokuthengisa nenzuzo.
Elinye lamathemba amakhulu laliku-iPhone 7 kodwa, yize iqiniso libukeka lidlule okulindelwe ngokuthengiswa kwemodeli enkulu, kubonakala sengathi lokhu akwanele ukumisa ukwehla osekuvele kuyindlela.
1 Ukuthengiswa kwe-IPhone 7 akulandeli i-downtrend
1.1 Kungani intshisekelo ekhuphukile ku-iPhone 7 Plus
1.2 Amamodeli athengisa kakhulu
1.3 Ukushoda kwamayunithi akubangelwa nje ukufunwa kakhulu
1.4 Ukuthengisa kuzoqhubeka nokuthambekela phansi
Ukuthengiswa kwe-IPhone 7 akulandeli i-downtrend
Izibalo eziphakeme zokuthengisa ze-iPhone 7 Plus nentshisekelo ekhulayo yomnyama ocwebezelayo akwanele ukulwa nokwehla kokuthunyelwa kwebanga le-iPhone.
Umhlaziyi odumile we-KGI Securities uMing-Chi Kuo usanda kukhipha inothi elisha kubatshalizimali maqondana nokufunwa kwe-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus entsha. Ekugcineni, uKuo ukuveza lokho ivolumu yokuthunyelwa kwe-iPhone 7 Plus ingcono kunalokho obekulindelwe, yize ivolumu yokuthunyelwa kwe-iPhone 7 ingaphansi kunaleyo yama-iPhone 6s.
Kungani intshisekelo ekhuphukile ku-iPhone 7 Plus
Into eyodwa ebambe iqhaza ekuthunyelweni okuphezulu kunokulindelekile kwe-iPhone impikiswano ezungeze amabhethri e-Samsung Galaxy Note 7. Ukuqhuma nemililo ebangelwe yilawa madivayisi, kanye nesinqumo esingenakugwemeka sokuwahoxisa emakethe, kuphoqe abasebenzisi ukuthi bafune enye indlela uma befuna i-smartphone enkulu yesikrini.
UKoo naye uyakuveza lokho ukusebenza kwekhamera okubili kwe-iPhone 7 Plus yamukelwe kahle, ngaleyo ndlela yasiza ukuthengisa kwedivayisi.
Amamodeli athengisa kakhulu
Ngokuya ngezinketho zombala ezithandwayo, ucwaningo olwenziwe yi-KGI lukhombisa lokho umnyama ocwebezelayo uyindlela ethandwa kakhulu. Le modeli ibalelwa cishe kumaphesenti angama-30-35 wokuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswa emhlabeni wonke, ngenkathi eChina kube namaphesenti angama-45-50 ngesikhathi sesigaba sangaphambi kokudayiswa.
Mayelana namandla, Imodeli engu-128GB kuye kwaba njalo Okufunwa kakhulu ngokocwaningo.
Mayelana nokwehlukana phakathi kwe-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus, uKoo usho lokho izinombolo ze-iPhone 7 Plus zicishe zilingane nalezo ze-iPhone 7, futhi ikakhulukazi ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Galaxy Note 7.
Ukushoda kwamayunithi akubangelwa nje ukufunwa kakhulu
UKuo futhi uyaphawula esitatimendeni sakhe ukuthi Ukushoda okuzungeze ukwethulwa kwe-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus akubangelwa kuphela ukufuneka kwemakethe. Imodeli emnyama ecwebezelayo inzima kakhulu i-Apple ukuyenza, inikela ngenzuzo yokubuyiselwa kwamaphesenti angama-60 kuye kwangama-70 uma kuqhathaniswa nawo wonke amanye amamodeli. Ngaphezu kwalokho, i-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus zethulwe emazweni angama-28, kanti ngonyaka odlule kwavulwa ama-iPhone 6 emazweni ayi-12, nawo afaka isandla ekuhlinzekeni ukusweleka.
Ukuthengisa kuzoqhubeka nokuthambekela phansi
Ekugcineni, uKoo ubikezela ukuthi, ngaphandle kwemiphumela emihle ye-iPhone 7 Plus, i-Apple izobona ukwehla kokuthengisa unyaka nonyaka kwamadivayisi ayo amasha. Ukwehla konyaka nonyaka kokuthunyelwa kwedivayisi yakho entsha. Yize i-KGI inyuse ukulinganisa kwayo kusuka kumayunithi ayizigidi ezingama-60-65 kuya kwizigidi ezingama-70-75, Ukuthunyelwa kwe-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus kulindeleke ukuthi ekugcineni kube ngaphansi kwe-iPhone 6s ne-iPhone 6s Plus kusuka ngonyaka odlule.
Amathemba evolumu yokuthumela ye-iPhone 7 Plus angcono kunalokho obekulindelwe ngenxa yokukhumbula i-Samsung's Galaxy Note 7 ngenxa yokuqhuma kwamabhethri nokwamukelwa okuhle kwesici sekhamera ye-iPhone 7 Plus; Sikholelwa ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamasheya yakamuva yi-Apple kanye namalungu ayo ekuthengisweni kwempahla kusho ukuthi lezi zinzuzo sezivele zehlisiwe.
Silindele ukuthi ivolumu yokuthunyelwa kwe-iPhone 7 ngo-2016 izoba ngaphansi kunaleyo ye-iPhone 6S ngo-2015.
Ukushoda kokuqala kokuphakelwa kwe-iPhone 7 kungenxa yesidingo esingcono kunokulindelekile se-iPhone 7 Plus nokutholakala okwanele kwamakhava. umnyama ocwebezelayo kubangelwe yizinga eliphansi lokukhiqiza lembuyiselo yama-60-70%; ukufunwa komhlaba kusabuthakathaka kunalokho kwe-iPhone 6S.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ukuphusha kwe-iPhone 7 Plus kwehluleka ukumisa ukwehla kokuthengisa
USiri angathatha ifomu lomzimba: Umsizi we-Apple wasekhaya
Ungayisebenzisa kanjani i-Control Center entsha ku-iOS 10 (I)